Social Media နဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာမြား ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Social Media နဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာမြား ?
Social Media မကောငျးကွောငျးကို Social Media ပျေါတကျပွောရတာလညျး သိပျတော့မကောငျး။ နညျးနညျးတော့ အားနာစရာ။ မိနျးမခကျြကြှေးတာ ပလုပျပလောငျးစားရငျး မိနျးမအတငျးပွောရသလိုပဲ သိပျတော့ သဘာဝမကလြှ။ မိနျးမဆိုတာ မရှိမကောငျးရှိမကောငျးလို့ ပွောကွေးဆို Social Media ဆိုတာကတော့ မိနျးမထကျပိုဆိုးတယျပွောလို့ရတယျ။
မိနျးမကို အခဈြလှနျရငျ မိနျးမပိုပြျောမှာ သခြောပမေဲ့ Social Media တှမှော အခဈြလှနျ အခြိနျကုနျ စှဲလနျးလှနျးရငျတော့ ကြား/မ မရှေး ဒီလို ကနျြးမာရေးပွဿနာတှပေါ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
Social Media ကွောငျ့ တိုကျရိုကျထိခိုကျတာတှရှေိသလို ဖုနျး ကှနျပြူတာ ကွာရှညျသုံးလို့ဖွဈတာတှလေညျး ပါတာပေါ့။
ဖုနျးတှေ ကှနျပြူတာတှရေဲ့ မကျြနှာပွငျက blue light လို့ ချေါတဲ့ တောကျပတဲ့ အဖွူရောငျ အလငျးဟာ မကျြလုံးမွငျလှာကို ထိခိုကျစတောမို့ ကွာကွာသုံးလေ အမွငျအာရုံ ထိခိုကျလာနိုငျလဖွေဈပါတယျ။
အခြိနျကုနျလို့ ကုနျမှနျးမသိ ခေါငျးငုံ့ ဖုနျးပှတျရငျး social media ပျေါ မြောလှငျ့နရောက လကျတှဘေ့ဝထဲလညျး ပွနျရောကျရော ဇကျကွောတှနောနတောမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။
လညျပငျးကြီးပေါငျးရောဂါအခံ ရှိသူတှမှော ပိုဆိုးသှားတတျပါတယျ။
မကွာခဏ ဇကျကို အနအေထားပွောငျးပေးပါ။
ဖုနျးကိုကွာကွာကိုငျရငျး လကျဆဈကလေးတှေ နာလာတတျသလို ဖုနျးအပူရှိနျကွောငျ့ လကျထုံလာတာမြိုးတှလေညျး ဖွဈတတျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လကျဖြံကွှကျသားတှမှောလညျး ဒဏျဖွဈလာတတျပါတယျ။
ခုနက ပွောခဲ့တဲ့ မွငျလှာထိခိုကျစတေဲ့ blue light မှာ ကွောကျစရာ နောကျထပျ အန်တရာယျတဈခုရှိပါသေးတယျ။
ဦးဏှောကျက ပုံမှနျအိပျပြျောဖို့အတှကျ ထုတျပေးတဲ့ Dark hormone လို့ တငျစားချေါကွတဲ့ မရှိမဖွဈ Melatonin ဟျောမုနျး မထှကျအောငျ blue light က တားပါတယျ။
ညအိပျမပြျောသူတှေ မအိပျခငျ နှဈနာရီနောကျပိုငျး ဖုနျး ကှနျပြူတာမသုံးဖို့ ဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ။
မသုံးမဖွဈ သုံးရမယျ ဆိုရငျလညျး blue light ကို filter လုပျပွီးပိတျထားနိုငျတဲ့ application တှေ အသုံးပွုရပါမယျ။
ဆေးပညာဗဟုသုတ အလှဲတှနေဲ့ ဆေးဝါးအလှဲတှေ
အယုံလှယျတဲ့ ဗီဇအခံနဲ့ နရောတကာကူညီခငျြစိတျ တှကေ ဒီအမှားတှကေို ပံ့ပိုးလိုကျတဲ့အခါ social media ကွောငျ့ ပိုဆိုးတဲ့ ကနျြးမာရေးပွဿနာတှေ ဖွဈသှားတတျပါတယျ။
စိတျကရြောဂါ နှငျ့ အခွား စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဿနာမြား
Social media မှာ ပြျောရှငျ တကျကွှ အောငျမွငျ လှပ ‘ပွ’နသေူတှကေို ကွညျ့ရငျး depression ဝဒေနာတှေ ပိုဆိုးလာတတျပါတယျ။
ကိုယျ့ကိုယျကို ထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးတှေ ကဆြငျးလာတတျပါတယျ။
Online Shopping တှရေဲ့ စှဲဆောငျမှုနဲ့ လှယျလငျ့တကူ ဝယျယူနိုငျမှုတှကွေောငျ့ Impulse Control Disorder လို စိတျဝဒေနာတဈမြိုးလို့ ယူဆလာကွတဲ့ အလှနျအကြှံ မွငျသမြှဝယျတတျတဲ့ compulsive shopping ဆိုတဲ့ စိတျဝဒေနာမြိုးတှေ ပိုဆိုးလာတတျပါတယျ။
ဒါတှေ အပွငျ ဖုနျးပှတျရငျး အစားအသောကျစားတဲ့ အကငျြ့ကွောငျ့ အစာမကွတေဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈလာတတျပါတယျ။
အစားအသောကျပမာဏကို မခငျြ့ခြိနျနိုငျတာကွောငျ့လညျး တဖွညျးဖွညျး အဝလှနျလာတဲ့ ပွဿနာတှလေညျး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
?ဒီ Social Media တှရေဲ့ ကောငျးတဲ့ အခကျြတှလေညျး အမြားကွီးရှိသေးတာမို့ အပွီးတိုငျ မစှနျ့လှတျနိုငျသေးခငျမှာတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ထိနျးခြုပျပွီး အခြိနျနညျးနိုငျသမြှနညျးနညျးပဲ သုံးရပါလိမျ့မယျ။
Social Media သုံးမဲ့အခြိနျမှာ တခွားအကြိုးရှိမဲ့ အရာတဈခုခုနဲ့ တဖွညျးဖွညျး အစားထိုးပွီး Social Media Detox လုပျတဲ့ နညျးလမျးတှကေို ရှာရပါမယျ။
လူမှုကှနျရကျထောငျခြောကျတှထေဲက ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ကယျတငျရုနျးထှကျ ကနျြးမာနိုငျကွပါစေ..
? Social Media နဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ ?
Social Media မကောင်းကြောင်းကို Social Media ပေါ်တက်ပြောရတာလည်း သိပ်တော့မကောင်း။ နည်းနည်းတော့ အားနာစရာ။ မိန်းမချက်ကျွေးတာ ပလုပ်ပလောင်းစားရင်း မိန်းမအတင်းပြောရသလိုပဲ သိပ်တော့ သဘာဝမကျလှ။ မိန်းမဆိုတာ မရှိမကောင်းရှိမကောင်းလို့ ပြောကြေးဆို Social Media ဆိုတာကတော့ မိန်းမထက်ပိုဆိုးတယ်ပြောလို့ရတယ်။
မိန်းမကို အချစ်လွန်ရင် မိန်းမပိုပျော်မှာ သေချာပေမဲ့ Social Media တွေမှာ အချစ်လွန် အချိန်ကုန် စွဲလန်းလွန်းရင်တော့ ကျား/မ မရွေး ဒီလို ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေပါ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Social Media ကြောင့် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်တာတွေရှိသလို ဖုန်း ကွန်ပျူတာ ကြာရှည်သုံးလို့ဖြစ်တာတွေလည်း ပါတာပေါ့။
ဖုန်းတွေ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်က blue light လို့ ခေါ်တဲ့ တောက်ပတဲ့ အဖြူရောင် အလင်းဟာ မျက်လုံးမြင်လွှာကို ထိခိုက်စေတာမို့ ကြာကြာသုံးလေ အမြင်အာရုံ ထိခိုက်လာနိုင်လေဖြစ်ပါတယ်။
? လည်ပင်းကျီးပေါင်း ပိုဆိုးလာခြင်း
အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိ ခေါင်းငုံ့ ဖုန်းပွတ်ရင်း social media ပေါ် မျောလွင့်နေရာက လက်တွေ့ဘဝထဲလည်း ပြန်ရောက်ရော ဇက်ကြောတွေနာနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လည်ပင်းကျီးပေါင်းရောဂါအခံ ရှိသူတွေမှာ ပိုဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။
မကြာခဏ ဇက်ကို အနေအထားပြောင်းပေးပါ။
? လက်ဆစ်နာခြင်း ထုံခြင်း
ဖုန်းကိုကြာကြာကိုင်ရင်း လက်ဆစ်ကလေးတွေ နာလာတတ်သလို ဖုန်းအပူရှိန်ကြောင့် လက်ထုံလာတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်ဖျံကြွက်သားတွေမှာလည်း ဒဏ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ မြင်လွှာထိခိုက်စေတဲ့ blue light မှာ ကြောက်စရာ နောက်ထပ် အန္တရာယ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။
ဦးဏှောက်က ပုံမှန်အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် ထုတ်ပေးတဲ့ Dark hormone လို့ တင်စားခေါ်ကြတဲ့ မရှိမဖြစ် Melatonin ဟော်မုန်း မထွက်အောင် blue light က တားပါတယ်။
ညအိပ်မပျော်သူတွေ မအိပ်ခင် နှစ်နာရီနောက်ပိုင်း ဖုန်း ကွန်ပျူတာမသုံးဖို့ ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
မသုံးမဖြစ် သုံးရမယ် ဆိုရင်လည်း blue light ကို filter လုပ်ပြီးပိတ်ထားနိုင်တဲ့ application တွေ အသုံးပြုရပါမယ်။
? ဆေးပညာဗဟုသုတ အလွဲတွေနဲ့ ဆေးဝါးအလွဲတွေ
အယုံလွယ်တဲ့ ဗီဇအခံနဲ့ နေရာတကာကူညီချင်စိတ် တွေက ဒီအမှားတွေကို ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အခါ social media ကြောင့် ပိုဆိုးတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
? စိတ်ကျရောဂါ နှင့် အခြား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
Social media မှာ ပျော်ရွှင် တက်ကြွ အောင်မြင် လှပ ‘ပြ’နေသူတွေကို ကြည့်ရင်း depression ဝေဒနာတွေ ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ကျဆင်းလာတတ်ပါတယ်။
Online Shopping တွေရဲ့ စွဲဆောင်မှုနဲ့ လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူနိုင်မှုတွေကြောင့် Impulse Control Disorder လို စိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုးလို့ ယူဆလာကြတဲ့ အလွန်အကျွံ မြင်သမျှဝယ်တတ်တဲ့ compulsive shopping ဆိုတဲ့ စိတ်ဝေဒနာမျိုးတွေ ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေ အပြင် ဖုန်းပွတ်ရင်း အစားအသောက်စားတဲ့ အကျင့်ကြောင့် အစာမကြေတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အစားအသောက်ပမာဏကို မချင့်ချိန်နိုင်တာကြောင့်လည်း တဖြည်းဖြည်း အဝလွန်လာတဲ့ ပြဿနာတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
?ဒီ Social Media တွေရဲ့ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေလည်း အများကြီးရှိသေးတာမို့ အပြီးတိုင် မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးခင်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်ပြီး အချိန်နည်းနိုင်သမျှနည်းနည်းပဲ သုံးရပါလိမ့်မယ်။
Social Media သုံးမဲ့အချိန်မှာ တခြားအကျိုးရှိမဲ့ အရာတစ်ခုခုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အစားထိုးပြီး Social Media Detox လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာရပါမယ်။
လူမှုကွန်ရက်ထောင်ချောက်တွေထဲက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကယ်တင်ရုန်းထွက် ကျန်းမာနိုင်ကြပါစေ..
အတူနခွေငျး၏ ကနျြးမာရေးအာနိသငျမြား ?
စိတျဖိစီးမှုမြားက ဦးဏှောကျကို ဖိရာဝယျ ?